Iyyaa iyya dabarsaa! Wallistuu Oromoo jalatamtuu fii beekkamtuun Aaddee Haliimaa Daawwee dhukkubsattee sireerra jirti…dirmaadhaaf!! – Welcome to bilisummaa
Iyyaa iyya dabarsaa! Wallistuu Oromoo jalatamtuu fii beekkamtuun Aaddee Haliimaa Daawwee dhukkubsattee sireerra jirti…dirmaadhaaf!!
bilisummaa October 22, 2014	Leave a comment
.Na gargaaraa Adaraa!!!
Yeroo Dargaggummaa koo
Gaafa humni koo jirtu
Gaafa Lammiin Oromoo
Afaan sheetti qaanoftu
Jimmaaf Aggaaroon ba’ee
Shawaa keessa Imalee
Baaleef Arsii Naanna’ee
Boorana irra jiraadhee
Wallagga waliin ga’ee
Aadaa keenya Guddisuuf
yeroos waan baayyeen ta’e.
har’a aadaa keessaniin
dhugaan akka boontaniif
Afaan keessan jaallachuun
akka ittiin dubbattaniif
gaafa Dargaggummaa koo
waan hunda carraaqeeraa
yeroo koo aarsaa godhee
akka dungoo copheeraa.
har’a humni koo dhumee
dhukkubnis natti duultee
akkan hin carraaqqannef
sireetti na galchitee
dhaabbachuus hin danda’u
Jilbi kiyya Laafeeraa
Godoo jireenya koottis
Dukkanni na dhaaleeraa.
Lammii koo isin malee
abdii biraas hin qabu
nan beeka Sabni kiyya
na gargaaruu hin dadhabu.
Harka kiyya diriirsee
Gargaarsa eegaan jiraa
Osoo Lubbuun koo jirtuu
na gargaaraa adaraa!!!
Weellistuu Haloo Daawwee!!!
kanneen gargaaruu feetan Lakkoofsa mana Baankii:-
“Lammiin Gaaddisa Waliiti!!
Tags Haliimaa daawwee sabboontu wallistuu
Previous Hawaasnii Oromoo Noorweey hirrira mormii godhan.
Next Guyyaa har’aa aada ummata bareeda ‪#‎Oromo‬ ‪#‎Hararghee‬ isiin wal barsiisa kan beekuu ammo isiin yaadachiifnna